Farmaajo, Deni & Axmed Madoobe oo kulan saacado dheer qaatay, Maxayse ka wada hadlayaan?
July 23, 2020 NEWS 4
DHUUSAMAREEB(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb oo habeenkii xalay ahayd uu kusoo gaba gaboobay shirka wada tashiga madaxda dowladd goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ay ka socdaan gudaha magaaladaasi kulamo gaar gaar ah oo u dhaxeeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland.
Kulanka oo ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin ayaan si rasmi ah loo ogeyn waxyaabaha lagu gorfeeyey shirka, balse waxaa soo baxaya warar sheegaya in kulankani diirada lagu saarayey khilaafka kala dhaxeeya madaxda dowladd goboleedyada Puntland iyo Jubbaland dowladda federaalka Soomaaliya.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo habeenkii xalay ahayd khudbad ka jeediyey shirka wada tashiga dowladda federaalk Soomaaliya iyo dowladd goboleedyada ayaa madaxweyne Farmaajo ku amaanay in uu sameeyey qaab odaynimo ah isla markaasna dulqaad iyo dadaal uu sameeyey uu ku qabsoomay shirka Dhuusamareeb.
Waxa ay labada madaxweyne si cad u sheegeen in meesha laga saaray khilaafkii kala dhaxeeyey dowladda federaalka, iyagoona shaaciyey in hoose ay u dhamaysan doonaan waxyaabihii la isku hayey.
Puntland iyo dowladda dhexe ayaa marar badan isku qabtay arimo kala duwan oo ay kamid yihiin siyaasada dalka, dhaqaalaha iyo waxbarashada oo soo jiitamaysay tan iyo sanadkii 2019, kadib khilaaf soo kala dhex galay wasaaradaha waxbarashada labada dhinac.
Jubbaland ayaa iyaduna aqoonsi ka haysan dowladda balse madaxtooyada Somalia ayaa hore u shaacisay in ay aqoonsan tahay maamulka Axmed Madoobe, waxaana hada xaalku u dhow yahay in la dhameeyo khilaafka u dhaxeeya labada dhinac.
Horey waxaa layskugu raacsanaa 6 qodob oo dhamaantood u baahan dhameystirka dhinacyada.
Mashaariicda horumarinta ee labada maamul ka xaniban,laga wada shaqeeyo sidii ay ku hirgali lahaayeen, gaar ahana mashaariic ay ku jiraan kuwa ka hirgali lahaa caasumada Puntland iyo hanaanka Dimuquraadiyadda Puntland.
In doorashada Jubbaland ee dhacday 22 August la meelmariyo, loona aqoonsado in ay ahayd mid ku timi sifo sharci ah, lagana wada hadlo wixii khaladaad aha ee dhacay oo gogol laysla ogol yahay dhinacyada wax tabanaya loo dhigo.
Arrinta gobalka Geda-na ay wadajir u xaliyaan Madaxweyne Farmaajo & Axmed Madoobe, si gobalka horumarkiisa wadajir looga shaqeeyo.
In lasoo afjaro xiisadda siyaasadeed, kahor bisha August bartamaheeda, lana dhameeyo dhammaan khilaafka taagan, ayna jiri doonaan safaro madaxda sare ay ku booqanayaan Kismayo & Muqdisho si kalsoonida loo soo celiyo.
In tageero laga siiyo maamuladan sidii ay ula dagaalami lahaayeen kooxaha xagjirka ah oo nabadda kasoo horjeeda, ciidamada DF Soomaaliya ee la geeyey gobalka Geda-na loo weeciyo la dagaalanka Al- Shabaab, deegaanadasna ay ka tirsan yihiin Dawlad gobaleedka Jubbaland.
In isfaham wadajir ah ay dhinacyadu ka gaaraan arrinta ku saabsan Doorashooyinka dalka ee 2021-ka si loo helo doorasho laysla ogol yahay.
INTELLECTUALLY, MUCH LOWER THAN THE WAY A FIFTH GRADE KID THINKS, WAR WAXAN MEESHA KA TIRA!!!
Waa daarood shiraya.. iska daaya wax dhib ah ma laha.
Yaa toloow la gaadayaa?! Qatar iyo Imaaraad ma heshiin karaan?
Farmaajo waa quustay, laakiin waa goor xeero iyo fandhaal kala dhaceen.